Ahoana ny fomba hahatratrarana ny mpihaino kendrena amin'ny Internet - Victor Mochere
Ny iray amin'ireo tolona lehibe indrindra ho an'ny mpivarotra nomerika dia ny fomba hahatratrarana ny mpihaino kendrena amin'ny fomba mahomby. Ady goavana izany, na dia izany aza no tena tanjona amin'ny varotra nomerika. Izy io koa no tanjona lehibe indrindra ho an'ny mpivarotra nomerika satria alohan'ny ahafahanao mivarotra ny orinasanao sy izay azony atolotra ho an'ny olona dia mila manatratra ny mpihaino kendrena aloha.
Alaivo sary an-tsaina fotsiny ny fivarotana ny vokatrao amin'ny mpihaino diso. Mety hahomby ianao amin'ny fisintonana ny saina etsy sy eroa, saingy amin'ny farany dia tsy hisy hividy ny serivisinao na ny vokatrao satria tsy ilainy izany. Ho fandaniam-potoana sy vola be izany. Izany hoe, mba hahafahanao mivarotra ny vokatrao sy ny serivisinao amin'ny fomba mahomby, ireto misy torohevitra vitsivitsy momba ny fomba hanatratrarana ny mpihaino anao.
1. Farito aloha ny mpihaino anao
2. Fantaro izay tadiavin'ny mpanjifanao
3. Diniho ny fomba tian'ny mpanjifanao handraisana ny atiny
4. Ampiasao ny influencers
5. Fampiasana tenifototra
Ny iray amin'ireo toro-hevitra momba ny fahatsiarovan-tena tsy azo ifanarahana izay mitondra ny varotra an-tserasera dia ny famantarana ny mpihaino kendrenao. Saingy, alohan'ny hahatongavanao amin'ny mpihaino kendrena anao dia tsy maintsy mahafantatra azy ireo aloha ianao. Azonao atao izany amin'ny alàlan'ny fananganana ny tenanao ho olona mpanjifa. Ity toetran'ny mpanjifa ity dia ho fanehoana ankapoben'ny mpanjifanao sy ny fomba hataony. Azonao atao ny manangana izany amin'ny fijerena ny demografikao sy ny toetrany ara-tsaina.
Ohatra, andao atao hoe mpanjono ianao. Mazava ho azy fa ny mpanjifa idealinao dia olona mila plumber, iray manana olana iray na maromaro amin'ny rafitra fantson-drano. Amin'ny maha-mpanjifa tena mila mpanao fantson-drano, dia mila mpanao fantson-drano izay mora idirana foana izy ireo ary manana fahaiza-mamaha olana haingana. Raha vantany vao nametraka ny fanerana ny mpanjifa ianao dia azonao atao ny mivarotra ny serivisinao miaraka amin'izany famantarana izany. Miaraka amin'ity paikady ity dia afaka manana fiovam-po sy fitarihana bebe kokoa ianao, ary hampitombo ny fidiram-bolanao.
Raha tianao ny mpanjifa hihaino izay lazainao amin'ny Internet, ny famoahana votoaty momba ny fanontaniana mahazatra indrindra ananany ao amin'ny tranokalanao dia ho fanampiana lehibe. Mazava ho azy fa tsy ho vita izany raha tsy mahafantatra izay tadiavin'ny mpanjifanao. Miaraka amin'ny fanadihadian'ny mpanjifa, ny fihainoana ara-tsosialy ary ny fikarohana teny fototra, dia afaka manana fotoana mora kokoa ianao amin'ny zavatra tadiavin'ny mpanjifanao matetika sy fikarohana momba azy. Amin'ny fahafantaranao ny zavatra ilain'ny mpanjifanao, dia azonao atao ny manangana ny fahatsiarovan-tena amin'ny marika momba ny maha manam-pahalalana azo itokisana sy mahatakatra ny mpanjifa.
Rehefa fantatrao izay tena ilain'ny mpanjifanao dia azonao atao ny mikaroka sy manapa-kevitra ny fomba tianao hampitaina ny atiny amin'ny mpanjifanao. Aleon'izy ireo ve ny lahatsoratra? Videos? Ahoana ny momba ny infografika? Ahoana ny amin'ny gazety? Rehefa fantatrao ny fomba tian'ny mpanjifanao mandany ny atiny dia azonao atao ny mifantoka amin'io lalana manokana io amin'ny famoronana ny atiny mifototra amin'ny endrika tiany. Ho fanampin'ny fitadiavana ny haino aman-jery tsara indrindra hampitaina amin'ny mpanjifanao, dia tokony ho fantatrao ihany koa ny fomba tianao hifandraisana amin'izy ireo.
Mamaly tsara ny vazivazinao ve izy ireo, sa aleony kokoa feo mitokana sy manana fahefana? Mahazo aina sy mahay momba ny ankamaroan'ny jargon indostrialy ve izy ireo, sa mila fehezan-teny laika bebe kokoa? Ny fandraisana ny feo mety amin'ny atiny dia zava-dehibe mba hahatonga ny mpanjifanao hahatsiaro ho mifandray sy mahazo aina kokoa, hahatonga azy ireo hahatsapa ho heno kokoa sy ho takatra kokoa.
Miaraka amin'ny firongatry ny influencers, ireo mpivarotra nomerika dia nandray haingana ny fomba marketing nomerika antsoina hoe influencer marketing. Mba hanaovana izany dia mila mitady olona malaza mifandraika amin'ny niche an'ny orinasanao ianao. Ny marketing influencer dia teknika ara-barotra tena tsotra nefa mahomby izay afaka manampy anao hahatratra ny tanjona ara-barotra amin'ny hetsika tokana. Raha mifandray sy mahay momba ny akanin'ny orinasanao ny namanao, dia azonao atao ny manatratra mpanjifa mety ho liana amin'ny orinasanao sy izay atolony.
Izany dia mamela ny famoronana mpitarika mahafeno fepetra sy ny fiovam-po, miaraka amin'ny fanatratrarana ny mpihaino anao amin'ny fomba mahomby kokoa. Ny fanentanana ara-barotra influencer voatanisa tsara sy vita tsara dia afaka manampy ny marikao hahatratra olona maro kokoa, indrindra raha efa manana mpanaraka be dia be ny influencer nofidinao. Ary tsy lazaina intsony fa matetika tsy lafo izany, izay midika fa afaka mahatratra tanjona ara-barotra maromaro ianao nefa tsy manapaka ny banky.
Miaraka amin'ny ankamaroan'ny olona amin'izao fotoana izao mandany fotoana betsaka amin'ny sehatra media sosialy, misy fomba maro azonao amidy amin'izy ireo: tenifototra. Ny tenifototra mifandraika sy manokana amin'ny indostria dia afaka manampy anao hanitatra ny fidiranao amin'ny mpihaino ary hahita olona liana amin'ny akanin'ny orinasanao. Ohatra, azonao atao ny mampiasa tenifototra toy ny #luxurytravel na #luxuryaccommodations raha manana marika hotely raitra ianao.
Malalaka ny marketing dizitaly, ary misy fomba maro izay afaka manampy anao hahatratra ny mpihaino kendrenao. Na izany aza, raha tsy misy ny fahaiza-mamorona sy ny fahaiza-mamorona, ny marikao dia ho lany ary tsy hahatratra mpihaino bebe kokoa rehefa mandeha ny fotoana. Amin'ny alàlan'ny fampiasana fitaovana mety hamidy ho anao, dia hiteraka fitarihana sy fiovam-po be dia be ianao.